Tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra any Andalusia | Vaovao momba ny dia
Andalusia dia iray amin'ireo vondrom-piarahamonina izay ahafahantsika mahita toerana maro hitsidihana, hatrany amin'ny tanàna ka hatrany tanàna kely mahafatifaty, ary indrindra ireo faritra amoron-tsiraka izay ahafahanao mankafy ny toetr'andro tsara. Izany no antony hitadiavantsika ireo tanàna amoron-tsiraka tsara tarehy any Andalusia.
ny tanàna amorontsiraka Andalusia Manolotra toerana mahafinaritra be dia be izy ireo ary, ambonin'izany, morontsiraka mahafinaritra ho an'ny filentehan'ny masoandro. Ny sasany amin'ireo tanàna amoron-tsiraka ireo dia mitondra sary mahazatra an'i Andalusia, ary amin'ny ankapobeny dia mpizaha tany daholo izy ireo, satria tsy misy zorony an'io tany sariaka io izay tsy fantatra.
Manomboka amin'ny tanàna mitondra antsika isika fitomboka mahazatra amin'ireo tanàna tsara indrindra any Andalusia. Manarona ny tampon'ny tendrombohitra manatrika ny ranomasina sy amin'ny faran'ny Sierra de Cabrera ny trano fotsy. Tanàna tena tsara tarehy izy io, misy trano fotsy manopy maso izay efa nijoro nandritra ny taonjato maro, ary nahita tanàna maro nandalo, hatrany amin'ny Fenisianina ka hatrany amin'ny Romana. Ny iray amin'ireo zavatra tokony hatao eto amin'ity tanàna ity dia ny fahaverezana eny amin'ny arabe tery, mankafy ny fotsifotsy amin'ireo trano mifanohitra amin'ny volon'ny lanitra sy ireo voninkazo mareva-doko eny amin'ny lavarangana. Ny loharano Mora dia iray amin'ireo teboka manan-tantara ao, izay nanolorana ny tanàna tamin'ny mpanjaka katolika. Azonao atao ihany koa ny mandeha mitsangantsangana amin'ny lalan'ny La Mena, manatrika ny ranomasina.
Tanàna kely i Níjar, na dia malalaka aza ny fe-potoam-piarahamonina. Izy io dia tanàna iray misy trano fotsy misy ny morontsiraka, akaikin'ny malaza Valan-javaboary Cabo de Gata. Avy amin'ity toerana ity dia azonao atao ny mitsidika ny efitra efitra Tabernas, izay nisy ny sarimihetsika koboy taloha. Ity tanàna ity dia manolotra toerana fizahan-tany be mpizaha tany miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra eo akaiky eo, na dia tsy dia manan-danja aza ny lova ara-kolotsaina noho izy io izay faritra norobain'ny piraty nandritra ny taonjato maro. Ity tantara mikorontana ity anefa dia tsy manafaka azy amin'ny maha-tanàna mahafinaritra izay mankafy hetsika fizahan-tany mahafinaritra ankehitriny.
Nerja dia tanàna iray fanta-daza any Espana satria izy no toerana nandefasana horonantsary maro an'ilay andiana angano 'Verano azul'. Raha hitsidika ny tanàna isika dia afaka mankafy fitsidihana an-torolàlana ihany koa hijerena ireo toerana nakana sary ireo sary ireo. Ho fanampin'izay, misy ny dika mitovy amin'ilay sambo Chanquete lehibe. Ny iray amin'ireo zavatra angano azo tanterahina eto amin'ity tanàna ity dia mitsidika ny Balkon any Eropa, miaraka amin'ny fahitana miavaka amin'ny ranomasina. La Cueva de Nerja dia zavatra iray hafa tokony hitsidika azy, ary ao afovoan-tanàna dia afaka mankafy trano fisakafoanana mahazatra sy fivarotana fahatsiarovana izahay.
Ity dia iray amin'ireo tanàna Andalaliana mahafinaritra, miaraka amin'ny trano fotsy tsara tarehy voaravaka voninkazo sy lovia seramika. Amin'ity toerana ity dia afaka mankafy ny fahitana mahafinaritra ny ranomasina ianao, ary koa ny tranobe misy ny faritra avaratry ny tanàna, izay ahitanao fomba fijery mahavariana. A Lapa Moorish tamin'ny taonjato faha-XNUMX eo an-tampon'ny vatolampy izay tao am-panjakan'i Nasrid dia tranomaizina mpanjaka. Eo akaikin'ny trano mimanda dia misy ny fiangonan'i Virgen del Rosario, asa Mudejar tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Tarifa dia iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana indrindra eto Andalusia, noho izany dia manana iray amin'ireo toerana tokony hitsidihanao farafaharatsiny indray mandeha izahay. Amin'ity faritra ity dia misy ny Morontsiraka Bolonia sy Valdevaqueros. Ho tsapantsika fa ny Tarifa dia ny mikan'ny fanatanjahantena amin'ny rano, miaraka amin'ireo papango kitesurfing an-jatony izay manidina eny amin'ny lanitra. Ho fanampin'izay, afaka mitsidika mahaliana vitsivitsy isika, toa ny tranon'ny Guzmán tamin'ny taona 960 izay mbola voatahiry tsara. Ankafizo ny fahitana mahatalanjona an'ny Mirador del Estrecho, izay ahitantsika ny morontsirak'i Afrika.
Estepona dia iray amin'ireo tanàn-dehibe ireo miaraka amin'ny hatsaram-panahin'i Andalusia tsy manam-paharoa. Toerana handehanana mangina amin'ireo arabeny, mankafy ny zoron-kely rehetra. ny Kianjan'ny voninkazo ao amin'ny tanànany taloha dia miaina mifanaraka amin'ny anarany izy io, miaraka amin'ny voninkazo miloko tsara tarehy izay mandravaka azy amin'ny fomba tsara indrindra. Azontsika atao ihany koa ny mitsidika tsangambato sasany amin'ny ampahany taloha, toy ny Castillo de San Luis. Azo atao ny mankafy tolakandro mahafinaritra ao Selwo Aventura, zoo, na mitsidika ny foiben-javakanto mpitaingina soavaly.
Ao Conil de la Frontera dia azo atao ny mankafy tontolo milamina akaikin'ny lava-bato sy morontsiraka mahafinaritra. Ny tanàna taloha dia tena tsara tarehy, miaraka amin'ny trano fotsy mahazatra misy tokontany anatiny, voaravaka vilany feno voninkazo. Ny zavatra sasany azo atao eto amin'ity tanàna ity, ohatra, dia fitsidihana ireo lavanty trondro ao amin'ny seranan-tsambo, ary avy eo manandrana ireo tuna avy amin'ny fandrika. Mandehana any amin'ny tsenan-tsakafo mba hahitana ny vokatra mahazatra azy ireo ary mividiana amin'ny andro tsena. Tsy tokony halahelo ny andro feno masoandro ianao amin'ny morontsirin'i Fontanilla sy any Cala de Aceite.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra any Andalusia
Ny tanàna mora vidy indrindra sy lafo indrindra any Eropa hitsidika azy
Antony 5 handehanana any Mali mitady traikefa nahafinaritra